पुरुषहरूले गर्ने चिन्ताफिक्री​—⁠चिन्ताफिक्रीको सामना गर्न बाइबलले दिने मदत
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आम्हारिक आर्मेनियन इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको उन्डुबेली (जिम्बावे) एस्टोनियन ओरोमो कन्नडा काबीय किन्यारवान्डा किर्गिज किलुबा कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन ग्रीक चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी टगालोग टर्किश डच डेनिश थाई नर्वेली नेपाली पंजाबी पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मले मल्यालम माया मालागासी मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार युक्रेनियन रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सिंहला सिडामा सेबूआनो सोट्सेल स्पेनिश स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
चिन्ताफिक्रीको * (एङ्‌जाइटी) सामना गरिरहेको व्यक्‍तिबारे सोच्दा तपाईँको दिमागमा कस्तो व्यक्‍तिको चित्र आउँछ? सायद तपाईँको दिमागमा डरले गर्दा केही पनि गर्न नसक्ने, बिहान खाटबाट उठ्‌नै नसक्ने वा आफ्ना फिक्रीहरूबारे मात्र कुरा गरिरहने व्यक्‍तिको चित्र आउँछ होला।
कोही-कोही चिन्ताफिक्रीको सामना गर्दा त्यस्तै व्यवहार देखाउँछन्‌। तर कसै-कसैले विशेषगरि पुरुषहरूले भने फरक प्रतिक्रिया देखाउन सक्छन्‌ भनेर अनुसन्धानकर्ताहरूले पत्ता लगाएका छन्‌। एउटा रिपोर्टले देखाएअनुसार पुरुषहरूले “चिन्ताफिक्रीको सामना गर्दा रक्सी पिउने र लागूपदार्थको प्रयोग गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले बाहिरबाट पिउने समस्याजस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यसको कारण अचाक्ली चिन्ताफिक्री हुन सक्छ। चिन्तामा डुबेका पुरुषहरू रिसाहा र चिढिने स्वभावका हुन्छन्‌।”
पक्कै पनि चिन्ताफिक्रीको सामना गर्दा सबै पुरुषहरूले एउटै प्रतिक्रिया देखाउँदैनन्‌। तर मानिसहरूको प्रतिक्रिया जस्तोसुकै भए पनि यो “असाध्यै कठिन समय”-मा चिन्ताफिक्री भनेको बढ्‌दै गइरहेको एउटा समस्या हो। (२ तिमोथि ३:⁠१) यदि तपाईँ पनि चिन्ताफिक्रीको सामना गर्दै हुनुहुन्छ भने के बाइबलले तपाईँलाई मदत गर्न सक्छ?
चिन्ताफिक्रीको सामना गर्न बाइबलले दिने व्यावहारिक सल्लाह
बाइबलमा हामी चिन्तित भएको बेला हामीलाई मदत गर्ने भरपर्दा सल्लाहहरूको खजाना पाइन्छ। तीन वटा उदाहरण विचार गर्नुहोस्‌।
१.“भोलिको चिन्ता कहिल्यै नगर किनभने भोलिको चिन्ता भोलिले नै गर्नेछ। आजको लागि आजकै कष्ट पर्याप्त छ।”​—⁠मत्ति ६:⁠३४.
अर्थ: भोलि के हुन्छ (वा के हुँदैन) भनेर अचाक्ली चिन्ता नलिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ। प्रायजसो अवस्थामा भोलि जे होला भनेर हामी चिन्ता गर्छौँ, त्यो नहुन सक्छ। अनि कुनै-कुनै अवस्थामा हामीले नराम्रो होला भनेर सोचेको तर राम्रो पो भइरहेको हुन्छ।
यसो गरे कसो होला? विगतमा तपाईँले पक्कै केही नराम्रो हुन्छ भनेर अनुमान गर्नुभएको तर पछि त्यस्तो नभएको कुनै घटना सम्झनुहोस्‌ त! त्यसपछि तपाईँलाई अहिले जुन कुराको चिन्ता छ, त्यो पछि गएर ठूलो समस्यामा परिणत हुने सम्भावना कत्तिको छ, विचार गर्नुहोस्‌।
२.“फलामले फलामलाई उध्याएझैँ एक जना साथीले अर्को साथीको बुद्धिलाई तिखार्छ।”​—⁠हितोपदेश २७:⁠१७.
अर्थ: यदि हामीले चाह्‍यौँ भने चिन्ताको सामना गर्न अरू मानिसहरूले हामीलाई मदत गर्न सक्छन्‌। तिनीहरूले हामीलाई आफ्नै अनुभवको आधारमा केही व्यावहारिक सल्लाहहरू दिन सक्छन्‌। कम-से-कम तिनीहरूले हामीलाई समस्यालाई बेग्लै दृष्टिकोणबाट हेर्न मदत दिन सक्छन्‌।
यसो गरे कसो होला? तपाईँलाई राम्रो सल्लाह दिन सक्ने कोही छ कि भनेर सोच्नुहोस्‌, जस्तै: तपाईँको जस्तै समस्या सामना गरिसकेका कुनै साथी। तिनलाई केले मदत गऱ्‍यो अनि केले गरेन भनेर सोध्नुहोस्‌।
३.“तिमीहरूले आफ्नो सारा फिक्री [वा “चिन्ता,” फुटनोट] उहाँमाथि बिसाओ किनकि उहाँले तिमीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ।”​—⁠१ पत्रुस ५:⁠७.
अर्थ: परमेश्‍वर दुःखकष्ट भोगिरहेकाहरूको गहिरो चासो राख्नुहुन्छ। आफूलाई पिरोलिरहेको कुनै पनि कुराबारे प्रार्थना गर्न उहाँले हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
यसो गरे कसो होला? तपाईँलाई पिरोलिरहेका कुराहरूको सूची बनाउनुहोस्‌। ती विषयहरूबारे परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्‌। उहाँलाई प्रत्येक समस्याबारे मन खोलेर बताउनुहोस्‌ अनि त्यो सामना गर्न मदत माग्नुहोस्‌।
जब चिन्ताफिक्री हुनेछैन
बाइबलले चिन्ताफिक्रीको सामना गर्न सल्लाह दिने मात्र होइन बरु हामीले अहिले झेलिरहेका चिन्ताफिक्री अब चाँडै नामेट हुने समयको प्रतिज्ञा पनि गरेको छ। यो कसरी हुनेछ?
हामीलाई जुन कुराहरूले गर्दा चिन्ताफिक्री हुन्छ, परमेश्‍वरको राज्यले ती कुराहरू हटाउनेछ। (प्रकाश २१:⁠४) त्यस राज्यले शासन गर्दा हामीले अहिले भोगिरहेको चिन्ताफिक्री र तनाव हाम्रो सम्झनामा समेत हुनेछैन।​—⁠यसैया ६५:⁠१७.
“शान्ति दिनुहुने परमेश्‍वर” तपाईँको भविष्य यस्तै भएको चाहनुहुन्छ। (रोमी १६:२०) उहाँ हामीलाई यस्तो आश्‍वासन दिनुहुन्छ: “तिमीहरूको निम्ति मैले के सोचेको छु, त्यो मलाई राम्ररी थाह छ। मैले तिमीहरूको शान्ति चिताएको छु, विपत्ति होइन। म तिमीहरूले उज्ज्वल भविष्य र आशा पाओ भन्‍ने चाहन्छु।”​—⁠यर्मिया २९:⁠११.
^ अनु. 1 यस लेखमा “चिन्ताफिक्री” (एङ्‌जाइटी) भन्‍ने अभिव्यक्‍तिले गम्भीर स्वास्थ्य समस्यालाई बुझाउँदैन। बरु मानिसहरूले हरेक दिन सामना गर्नुपर्ने तनाव वा समस्याहरूलाई बुझाउँछ। चिन्ताफिक्रीसित सम्बन्धित गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्‍तिहरूले विशेषज्ञहरूको मदत लिन सक्छन्‌।​—⁠लुका ५:३१.
सकारात्मक चिन्ता लाभदायी हुन्छ; नकारात्मक चिन्ता भने हानिकारक हुन्छ। सफलतापूर्वक चिन्ताको सामना कसरी गर्न सक्नुहुन्छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने पुरुषहरूले गर्ने चिन्ताफिक्री​​—⁠बाइबलले कसरी मदत गर्न सक्छ?
ijwbt लेख १४